Camera & Electronic – Myanmar Info Hub
Home Products Camera & Electronic
Mirroless Camera System အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသလို ကျောပိုးအိတ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို အဖြုတ်အတပ် အရွေ့အပြောင်း ပြုလုပ်နိုင်မယ့် Modular System နဲ့ Detachable Part တွေ ပါရှိပါတယ် ။ ခရီးဆောင် Backpack အဖြစ် ကင်မရာနဲ့ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေ ထည့်သွင်းသယ်ဆောင်တဲ့အခါ အဆင်ပြေစေဖို့ Carry-On Luggage အရွယ်အစားနဲ့ ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားပါတယ် ။ 15’’ Laptop နဲ့ Tablet အတွက် သီးခြား အိတ်တစ်ခု ကျောဘက်မှာ စီစဉ်ပေးထားသလို မလိုအပ်ပါက ဖြုတ်ထားနိုင်တယ် ။ ကျောပိုးအိတ်ရဲ့ အရှေ့ဘက်မှာ ကင်မရာအိတ်ပါရှိပြီး Detachable Part ဖြစ်တဲ့အတွက် အိတ်အပြင်ဘက်ကို ထုတ်ပြီး သီးခြား အသုံးပြုနိုင်ပြန်တယ် ။ External Tripod Connection တွေ ပါရှိတဲ့အတွက် အိတ်နဲ့အတူ …
လကမ္ဘာကို ဓါတ်ပုံလှမ်းရိုက်နိုင်မယ့် Nikon Coolpix P1000
Price – 999 US$ @ www.nikonusa.com Nikon ရဲ့ အောင်မြင်ထင်ရှား လူကြိုက်များတဲ့ Coolpix P900 ကို ဆက်ခံမယ့် Bridge ကင်မရာအမျိုးအစားသစ်ဖြစ်ပါတယ် ။ 35mm Term နဲ့ တွက်ချက်မယ်ဆိုရင် Zoom Range အနေနဲ့ 24-3000mm အထိရှိအတွက် Zoom Master အဖြစ် တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ် ။ ကမ္ဘာမြေပေါ်ကနေ Zoom ဆွဲယူရိုက်ကူးမယ်ဆိုရင် လ ရဲ့ အသွင်သဏ္ဍာန်ကို ကြည်လင်ထင်ရှားပြတ်သားစွာ ဖမ်းယူပုံဖော်နိုင်မှာပါ ။ Dynamic Fine Zoom လုပ်ဆောင်မှုလည်းပါဝင်တဲ့အတွက် ထပ်မံအနီးဆွဲယူ ရိုက်ကူးဖို့အတွက် 6000mm အထိ Zoom Range ကို တိုးမြှင့်နိုင်ပါလိမ့်မယ် ။ Max. Aperture အနေနဲ့ 24mm Wide End မှာ …
Mirrorless ကင်မရာတွေအတွက် ကျောပိုးအိတ် – Lowepro m-Trekker BP 150
သေးငယ်ကျစ်လျစ်ပေါ့ပါးတဲ့ ခေတ်ပေါ် Mirrorless ကင်မရာတွေနဲ့ လိုက်ဖက်ညီမယ့် ဒီဇိုင်းတည်ဆောက်ပုံရှိပြီး တာရှည်ခံတဲ့ Fabric နဲ့ ချုပ်လုပ်ထားပါတယ် ။ Gray Canvex နဲ့ Black Cordura ဆိုပြီး အရောင် – ၂ မျိုး ခွဲခြားထုတ်လုပ်ထားသလို ရာသီဥတု မရွေး အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် All Weather AW Cover လည်း စီစဉ်ပေးထားပါတယ် ။ 12’’ Laptop (သို့) 12.9’’ iPad Pro တို့လို Mobile Device တွေ ထည့်သွင်းသယ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် CradleFit Compartment သီးခြားပါဝင်ပါတယ် ။ ကျောပိုးအိတ်ရဲ့ အောက်ခြေမှာ Quick Release Strap ပါရှိတဲ့အတွက် Tripod (သို့) ခရီးဆောင်ထီး ချိတ်ဆွဲသယ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်သလို Elastic Side Pouch …
Lee အမှတ်တံဆိပ် Reverse ND Filter အမျိုးအစားသစ်
နေ၀င် ၊ နေထွက်ချိန်တွေမှာ ရှုခင်းဓါတ်ပုံရိုက်ကူးရေးတွေ ပြုလုပ်မယ့် ဓါတ်ပုံဝါသနာရှင်တွေနဲ့ သင့်လျော်ပါတယ် ။ သာမန် Graduated ND Filter နဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင် Reverse ND Filter တွေရဲ့ ထူးခြားချက်က Filter ရဲ့ အလယ်မှာ အလင်းရောင် ကွယ်ကာမှု အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီး Filter အစွန်းဘက်သို့ တဖြည်းဖြည်း အားပျော့ လျော့ပါးသွားတဲ့ အသွင်ဒီဇိုင်းရှိပါတယ် ။ ဒါ့ကြောင့် မနက်ခင်း အာရုံတက်ချိန်နဲ့ ညနေ နေ၀င်ချိန်တွေမှာ မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းနားက နေလုံးနဲ့ အတူ ကောင်းကင်နဲ့ တိမ်တွေရဲ့ အလှကို အလင်းအမှောင် ဖွဲ့စည်းမှု မျှတစွာ ဖမ်းယူပုံဖော်ပေးနိုင်ပါတယ် ။ သဘာဝကျတဲ့ ပြာလွင်တဲ့ ကောင်းကင်အရောင်နဲ့အတူ လုံးကြွသက်ဝင်နေတဲ့ တိမ်တိုက်တွေကို မြင်ကွင်းပုံရိပ်အတွင်းမှာ ထည့်သွင်းရိုက်ကူးနိုင်ပါလိမ့်မယ် ။ Lee Reverse ND Filter တွေကို …
DJI SPARK ကို သုံးသပ်ခြင်း
in : Articles, Camera & Electronic, Products
သေးငယ်တဲ့ ဒရုန်းလေးတွေက တကယ်တော့ အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါဘူး။ ကလေးငယ်တွေဆော့ကစားဖို့၊ ဈေးသက်သာစွာနဲ့ ဒရုန်းမောင်းလေ့ကျင့်ဖို့ စတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ ဈေးကွက်ထဲမှာ ကစားစရာအရွယ် ပန်ကာလေးလုံးတပ် ဒရုန်းလေးတွေကို ဈေးနှုံးချိုသာစွာနဲ့ ရရှိနေခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ ဒီဒရုန်းသေးလေးတွေက ဒရုန်းအကြီးလောက်များ အလုပ်ဖြစ်နေပြီလား? ဒါဆိုရင်တော့ အသစ်အဆန်းပါပဲ၊ အဲဒီအချက်ကတော့ DJI Spark ကို စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းစေဖို့ ပြုလုပ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံးနဲ့ အရေးအကြီးဆုံးအဖြစ် Spark ကို သင်သတိထားမိစေမယ့်အချက်က အရွယ်အစားဖြစ်ပါတယ်။ Spark ရဲ့ အင်မတန် သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားကြောင့် သူ့ရဲ့ ညီအစ်ကို Mavic Pro ကိုတောင် အလွန်ကြီးတဲ့ ဒရုန်းအဖြစ် ထင်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဥမာပေးရရင် Mavic Pro ကို အီတလီ အသားညှပ်ပေါင်မုန့်လို့သဘောထားရင် Spark က အီတလီ ပေါင်မုန့်လိပ်လေး ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ပြည်ထောင်စု လေကြောင်းစီမံခန့်ခွဲရေးဌာန (FAA) ရဲ့ နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဝါသနာရှင်တွေရဲ့ ဒရုန်းတွေကို မှတ်ပုံတင်ဖို့မလိုအပ်သေးတဲ့အချက် ပါလာတဲ့အတွက် ခင်ဗျားအနေနဲ့ Spark ကို ဘူးခွံထဲက ထုတ်ပြီးပြီးချင်း …
Nikon ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် Full-Frame DSLR – D850
Price – 3299 US$ (Body Only) @ www.nikonusa.com/ ပေါက်ကြားခဲ့တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေနဲ့ ကောလဟာလတွေရဲ့ အဆုံးသတ်အဖြစ် Nikon ဓါတ်ပုံဝါသနာရှင်တွေ မျှော်လင့်စောင့်စားနေတဲ့ D850 ကို စင်တင်ပွဲထုတ်လိုက်ပါပြီ ။ Nikon ကနေ ပထမဆုံး ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ဖန်တီးထားတဲ့ 45.7 Megapixels Resolution ရှိ BSI CMOS Image Sensor အသစ်ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ် ။ Low Pass Filter ဖြုတ်ထုတ်ထားသလို D5 မှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ 153-Point AF System ကို အသုံးပြုထားတယ် ။ EXPEED5Image Processor နဲ့ ပေါင်းစပ် ပုံရိပ်ဖမ်းစေမှာဖြစ်ပြီး Native Sensitivity အနေနဲ့ ISO 64-25600 ရှိတဲ့အတွက် Resolution …
TCL 2017 UHD Product Line မှ C2 series UHD TV များ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီ
CES 2017 ပွဲမှာ တတ်ရောက်လာခဲ့သူ အများရဲ့ အလေးထားစောင့်ကြည့်ခြင်းကို ခံခဲ့ရတဲ့ TCL 2017 UHD Product Line မှ C2 series UHD TV များ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာအနေနဲ့ 49″ နဲ့ 55″ နှစ်မျိုးကို ရရှိနိုင်မှာပါ။ C2 series TV များနဲ့ အခြား series TV များရဲ့ အဓိက ခြားနားချက်ကိုပြောပြပါဆိုရင်တော့ Software နဲ့ Hardware ဆိုပြီး နှစ်ပိုင်းခွဲပြောပြချင်ပါတယ်။ Hardware ပိုင်းမှာ အဓိကခြားနားချက်ကတော့ Home Audio ပိုင်းမှာ ဆရာတစ်ဆူ ဖြစ်တဲ့ Harman Kardon Speaker များကို Built In အသုံးပြုလာခြင်း ပိုမိုအဆင်မြင့်တင်ထားတဲ့ UHD panel များ …